Daarektarri FBI Baatii Dabre Taayitaa Irraa Hariyataman Har’a Koree Senetii Duratti Waa’ee Prezidaant Traampii fi Raashiyaa Dhugaa Ba’an
Waxabajjii 08, 2017
Ka prezidaant Traampiin taayitaa irraa hariyataman – Hoogganaan FBI duraanii – Jeems Koomeey, prezidaantichi akka lolee isaanii ta’anii fi qorannaa dhimma Raashiyaa dhiisan kan irraa eeganii turan ta’uu, Koree Basaasaa, ka Senetii Yunaayitid Isteets duratti dhugaa ba’an.
Traamp, hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa ol’aanaa, kan FBI – Jeems Koomey taayitaa irraa hari’uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa’ee Raashiyaan dhimma filannoo Yunaayitid Isteets ka bara dabree keessa harka galfattee jirti – jedhamee otuu dhaabbatichi qorataa jiruu ka taayitaa irraa hari’ataman Koomeen, eega sanaa as waa’ee haasawwan si’a sagal prezidaat Traamp waliin geggeessanii turanii ifatti dhugaa-ba’uun kun ka jalqabaa ta’uu isaa ti. Sagal kana keessaa, ja’a telefoonaan, sadii fuulaa fi fuulatti prezidaant Traamp waliin dubbatanii turan – Koomeen.
Prezidaant Traamp eega taayitaa irraa isaan hari’anii booda, waa’ee hariyitama isaanii ka prezidaantichi fi gargaartonni isaanii dubbatanii fi ibsan, ka yaada isaanii waliin-dhahe akka tahe dubbatan – Hoogganichi FBI duraanii. Itti fufuudhaanis, “Prezidaantichi, ana qaanessuu, ana caalaa immoo dhaabbata ani hoogganu qaanessuu filatan” – jedhan.
“Seerri daarektera FBI hujii irraa buusisu jiraachuu baatullee bulchiinsi kun anaa fi, ana caalaa ammoo FBI qaanessuu filate. Akkana jedheee, waan dhaabii kun gargar haharca’e, waan hoggana dansaa dbaabee fi bulchiinsi illee abdii irraa.Tun dhara.” Jedhan
Hariyatama isaaniif, “dhimma Raashiyaa, kan FBI qorataa jiru” kanuma prezidaantichi ofii dubbatanin fudhadha jechuun dubbatan. Waa’ee Raashiyaa ilaalchisee, waan haala Prezidaantichaa irraa hubatan ennaa dhugaa-ba’anis dhimma sanatti baay’ee dhiphachuu isaanii fi sababaa sanaaf hojii kaan hojjechuu dadhabuu isaanii akka irraa hubatan dubbatan.
Traamp baatii Amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda, “jala-deemtummaan barbaada. Jala-buutummaan eega” ittiin jechuu isaanii ilee dubbatanii jiran – Koomeen. Waa’ee gorsaa naga-eegumsa bioyyoolessaa hariyatame – waa’ee Maayikili Flin qorannaa geggeessuu akka dhaabu isa gaafachuu isaanii illee dubbatanii jiran.
Uummati Briteen Filannoo Geggeessuuf Sagalee kennaa Jiran
Pirz., Afrikaa Kibbaa,dubbiin itti owwuutti jirti Muddee dhuftu keessa itti gaafatamummaa paartii isaanii, ANC irraa buusuuf jala jiran
Haleellaa London Kan Torban Darbeen Namni Du’e Ka Biroon Argame
Traamp Abbaa Alangaa Federaalaa Duraanii Daayriktera FBI Gochuun Moggaasufu Jiru
Haleellaa Teeraan Keessatti Raawwatameef Iran Saa’udii Himatte
Tajaajilli Interneetii kan Cufameef Dantaa Barattootaa Guutuuf Jecha: Ministeera Kominikeeshinii Itiyoophiyaa
Guyyaa Ayyaanaa Ta'uus Of-eggannoon Akkaan Barbaachisaa Dha: Jiraattoota
Warreen Alaa Lammiiwwan Isaanii Itiyoophiyaa Keessaa Akka Ba’an Gaafachuu Itti Fufan
Mucaan Maalkoolm Eksi duutee argamtte
Prezidaantonni Yunaayitid Isteets affeerraa taasisan
Ayyaana Galataaf Namoonni Ennaa Wal Ga’anitti COVID 19 Ilaalchisuun Yaaddoon Jiru Dabalaa Jira